Sci-Hub, ụlọ akwụkwọ sayensị na-ahụ maka ọpụpụ na-enyere aka ịlụ ọgụ coronavirus - TELES RELAY
Sci-Hub, ọbá akwụkwọ sayensị na-ahụ maka pine na-enyere aka ịlụ ọgụ coronavirus
Na July 2011, Aaron Swartz boro ya ebubo na ọ na-ebudata ma na-ewepụta maka n'efu ihe nde sayensị 4,8 sitere na JSTOR, usoro mbipụta agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ akwụ ụgwọ Onye ọkà mmụta sayensị kọmputa (bụ onye sonyere na mmepe nke faili RSS na ikikere Creative Commons) ga-egbu onwe ya otu afọ na ọkara mgbe e mesịrị n'ihi nrụgide nke ikpe a na-echere. Ka ọ dị ugbu a, a mụrụ otu ikpo okwu nwere otu ebumnuche iji mee ka nchọpụta sayensị nweta: Sci-Hub.
Onye Alexandra Elbakyan, nwa agbọghọ dị afọ 23 dị na Kazakh n'oge ahụ, saịtị ahụ malitere ndụ dị ka ụdị nnọchiteanya maka ịnweta akwụkwọ sayensị site na nzere nbanye nke a gbaziri na mahadum ma ọ bụ ụlọ ọrụ nyocha. Ngwa ngwa, saịtị ahụ toro ma malite ịchekwa isiokwu ozugbo na sava akwụ ụgwọ site na mkpọsa igwe mmadụ nke Robin Hood nke Science, aha aha Alexandra Elbakyan. A na-eme ihe a niile n'ihu ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ sayensị dị iche iche, dị ka Elsevier ma ọ bụ Wiley, nke na-akwụkarị ụgwọ maka ịnweta akwụkwọ akụkọ.
Alexandra Elbakyan na-ekwu okwu na Harvard. Wikimedia Commons - CC BY 2.0
N'ụzọ doro anya, ihe ịga nke ọma nke saịtị ahụ na-akpata mwakpo hives na nnukwu ụlọ ọrụ ndị a. Na mkpesa 2015, Elsevier Group kwenyere na Sci-Hub abụghị ihe na-erughị a “Ofesi a na-ahụta ihe gbasara mba ụwa na nwebi iwu nwebiisinka” nke ga - emechi 4 rue 5% nke okporo ụzọ ụlọ ọrụ ahụ. Ikpe a na-ada ụda na-ekwughachi na Netherlands, obodo nna Elsevier, bụ ebe a na-ebo ụlọ ọrụ ahụ ebubo na-akwụ ụgwọ oke. Kemgbe ahụ, a wakpoola ikpo okwu ahụ mgbe niile, na France ọkachasị ebe na Paris Tribunal de grande dịka enyere iwu ka emechie saịtị ahụ na Maachị 2019.
Iche Iche iji gbochie coronavirus
egwu Ajụjụ ọnụ site na Jenụwarị 2019, onye guzobere saịtị ahụ kọwara na Sci-Hub dị “Dabere na echiche nke ọchịchị Kọmunist” ma na-achọ "Na-alụ ọgụ megide nrigbu nke ọrụ ndị ọkà mmụta sayensị". Dịka Céline Barthonnat, onye nchịkọta akụkọ CNRS na-echetara anyị, “Nkesa nke ihe omuma nke sayensi bu otu oru nke ndi oru nyocha [edemede L411-1 nke koodu nyocha] ”. Ọ na-agbakwụnye na “Ọ bụ ndị ọchụnta ego a na-eri mmadụ na-ekesara ọtụtụ nyocha a”.
Ọ bụ obere maka ebumnuche ndị a ka Sci-Hub bipụtara na 2019, dịka onye okike ya si kwuo, nleta 400 kwa ụbọchị. Ndị France dịkwa ugbu a ebe ọ bụ na Hexagon bụ otu n'ime mba iri na-ejikarị ikpo okwu. A ghaghi ikwu na dika onu ogugu di nso, Sci-Hub nwere nde akwukwo 000, ma obu 62% nke isiokwu ndi isi biputara.
Ya mere, o bu ihe okike na ikpo okwu chọtara onwe ya na obi akuko na mbata nke coronavirus. Otu ìgwè ndị na-edebe ihe ochie na Reddit enyeworị onwe ya ozi nke ịga chọọ ụlọ ebe a na-edebe ihe ochie nke Sci-Hub iji wepụta nyocha niile gbasara ọrịa ọhụrụ a na nso nso a. “Ahụike ahụike zuru ụwa ọnụ” site n'aka WHO. Ejiri Sci-Hub weputa mkpokọta akwukwo sayensi 5 wee bulite ha na weebụsaịtị Wee.Eye.eu.
"Anyị enweghị ike ịnweta ebe nchekwa ihe dị otú ahụ ma ọ bụrụ na anyị enweghị ndị na-arụ ọrụ n'ụgbọ mmiri", na-akọwa Martin Clavey, onye nta akụkọ sayensị, tupu ọ gaa n'ihu: Ndị a emeela ọrụ ha nke nchekwa akwụkwọ, mana ha bụ ndị ohi dịka Sci-Hub site n'ime ka nyocha niile a dị n'efu. A na-ewere ọnọdụ ahụ n'ụzọ zuru ezu site na otu na-ahụ maka okekọrịta nke na-akọwa na “Iwu akwadoghị oru ngo, mana ọ bụ ihe kwesiri ekwesi. Anyị na-ajụ ibuputa nwebisiinka karịa ndụ mmadụ ”.
E manyere ndị nkwusa iso?
Ebumnuche nke nnukwu onye ọrụ ohi a? Iji zere mmeghe emere na 2015 n'oge nke oria Ebola, mgbe otutu ndi oru nyocha no na mba Africa enweghi ike igbochi oria nke oria a nihi na odighi nfe inweta isi ihe nyocha sayensi.
"O doro anya na eziokwu na a na-emeghe oghere enyerela aka nyocha na mba Africa", juputara Martin Clavey tupu ịkọwa nke ahụ “Nye ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta, Sci-Hub bụ naanị ụzọ iji nweta akwụkwọ akụkọ sayensị. Ndị ọzọ na-eji ya, n'ihi na ọ dị mfe karịa ọnụ ụzọ ámá ndị raara onwe ha nye ”. Mkparịta ụka ahụ fọrọ nke nta ka ọ cheta na banyere ịkụ egwu egwu na 2000s.
Dịkwa ka akwụkwọ ndekọ aha na 2000s, ndị nwe ikike ejedebere na-enyefe oke oke ọdịnaya ha. Elsevier et Wiley emeela mbipụta ha na coronavirus n'efu. O doro anya na iji nsogbu ahụike zuru ụwa ọnụ na-azụ ahịa ga-abụ ihe jọgburu onwe ya. Ajụjụ site Vice, Otu n'ime ndị na-akpata oke mbanye anataghị ikike ka na-ebube: "Cheedị ihe ga - ekwe omume ma ọ bụrụ na ha mere nke a tupu…"
Ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri, ọgụ a na-achọ inweta ihe ọmụma na-aga n’ihu n’ Internetntanet, ndị sayensị na ndị ọkà mmụta sayensị ekwubeghị okwu ikpeazụ ha. Ihe akaebe? E jiri Alexandra Elbakyan tụnyere Edward Snowden na 2016, yana Martin Clavey, “Ọrụ Alexandra bụ mgbakwunye nke ihe Aaron Swartz mere”. Gburugburu okirikiri ahụ.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/sci-hub-la-bibliotheque-scientifique-pirate-qui-aide-a-lutter-contre-le-coronavirus-n147051.html
Ọ dịkarịa ala, ọrịa 6 nke cancer hụrụ na klas nke gụsịrị akwụkwọ na 2016 nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị Long Island
Ọchịchọ ndị Africa na-eji ngwa 1xbet